September 7, 2020 – Xorriya Online
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa ka hadlay ardaydii gobolka Banaadir ee ku dhacday imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare. Cumar Filish ayaa sheegay in sababta ardaydaas ay imtixaanka ugu dhaceen ay tahay dadaal yari xagooda ah, isla markaana ay ku mashquuleen isticmaalka aaladda Tiktok iyo muqaadaraadka loo yaqaano […]
Shirkii deg degga ahaa ee ay maanta yeesheen golaha wasiirada oo meel mariyay Xubnaha Guddiga ee La-dagallanka Musuq-maasuqa
Golaha wasiirrada xukuumadda xil-gaarsiinta ayaa maanta Muqdisho ku yeeshay shir deg deg ah oo ka baxsan midka toddobaadlaha ah ee la qabto khamiis kasta. Kulankii maanta ayey golaha waxay ku meel mariyeen sagaal (9) xubnood oo wasaaradda caddaaladdu ay u soo xushay inay kamid noqdaan guddiga madaxa bannaan ee la-dagaallanka musuq-maasuqa, sida lagu sheegay war-saxaafadeed […]
Garoonka Diyaaradaha Degmada Xudur Oo Dib U Habeyn Ku Socoto “SAWIRRO”
Shirkadaha iska leh diyaaradaha xamuulka qaada ee isticmaala garoonka diyaarada ee Degmada Xudur ayaa cabasho ka keeney isticmaalka garoonka gaar ahaan halka diyaaradaha ay ku ordaan oo ay sheegeen in uu leeyahay dhagxaan iyo jaay badan oo diyaaradaha aan ku ordi karin. Maamulka Degmada Xudur ee Gobolka Bakool Maareeyaha Garoonka Diyaarada iyo Wakiilada shirkadaha diyaaradaha […]
Mareykan oo ka hadlay askari ay Alshabaab ka dhawaceen iyo weererkii cuslaa ee lagu qaaday
Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ayaa qirtay in khasaare uu kasoo gaaray weerarkii maanta Al-Shabaab ay ku qaaday deegaanka Janaa Cabdalle ee gobolka Jubbada Hoose. Chris Karns oo ah afhayeenka AFRICOM ayaa VOA u sheegay in hal askari oo Mareykan ah uu ku dhaawacmay weerarka, wuxuuna intaas ku daray in askarigaas ay iminka xaaladdiisa […]
Golaha Wasiirada Soomaaliya oo shir aan caadi aheyn yeelanayo iyo wararkii ugu dambeeyey
Golaha Wasiirada ee xilka siihaya ayaa maanta oo Isniin ah la isugu yeeray shir aan caadi aheyn, kaddib farriin qoraaleed loo diray xalay iyo saaka. Shirka Golaha Wasiirada ayaa la sheegay inuu dhici doono 2-da duhurnimo, waxaana si rasmi ah loo ogeyn waxyaabaha looga hadli doono. Hase ahaatee, waxaa la sheegayaa inay dhici karto in […]
Taageerayasha madaxweyne Trump oo doon rogmatay ‘sawirro’
Dhowr doonyood ayaa ku degay haro ku taal gobolka Texas ee dalka Mareykanka intii lagu guda jiray dhoolatus lagu taageerayay madaxweyne Donald Trump doorashada dhici doonta November, sida ay saraakiishu sheegeen. Masuuliyiintu waxay sheegeen in mawjadaha iyo kacsanaanta haradu ay u badan tahay inay sababeen markabbo fara badan oo kusii jeeday harada Lake Travis, oo […]
Ciidamda dowladda Soomaaliya oo ku wada dagaalamay magaalada Balad Xaawo
Wararka aan ka heleyno magaalada Belad Xaawo waxay sheegayaan in maanta ay gudaha magaaladaas isku rasaaseeyeen ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda federaalka ay geysay gobolka Gedo. Dadka ku nool magaalada Beled Xaawo ayaa soo sheegaya in israsaaseyntu ay dhex martay ciidamo ka kala tirsan Booliska ka howlgala gudaha magaalada iyo kuwa Gorgor. Waxaa jira […]
Gudoomiyihii hore Gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed ayaa war qoraal ah uu kusoo daabacay bartiisa Facebook kaga hadlay waxa uu ka aaminsan yahay Natiijooyinka Imtixaanka dalka ee ay Wasaaraddu soo saartay shalay. Gudoomiyihii hore wuxuu aaminsan yahay iney jiraan waxyaabo badan oo is diidan iyo humaag ku jira hanaanka loo maray, sidoo kale wuxuu walaac […]
Boqorka Sacuudi Carabiya oo madaxweyne Trump kala hadlay arrimaha Falastiin
Boqorka Sacuudi Arabiya Salmaan bin Cabdilcasiis ayaa madaxwaynaha Maraykanka Donald Trump u sheegay in wadamada Khaliijka ay doonayaan xal caadil ah oo kama danbays ah oo laga gaaro qadiyadda Falastiin, iyadoo la tixraacayo hindisihii carabta ee 2002dii. Labadan mas’uul ayaa ku wada hadlay qadka taleefanka, kadib qorshihii Maraykanka uu gar-hayeenka ka ahaa ee Imaaraadka Carabtu […]
Madaxda Xamaas iyo Xisbullaah oo ka wada hadalay arrimo ku saabsan Isreal iyo dalalka Carabta
Hogaamiyeyaasha dhaqdhaqaaqa Xisbullaah iyo ururka Xamaas ayaa kulmay si ay uga wada xaajoodaan xidhiidhkii diblomaasiyadeed ee ay lahaayeen Israa’iil iyo qaar ka mid wadammada Carabta. Hogaamiyaha ugu sarreeya Xamaas Ismail Haniya ayaa si diirran loogu soo dhawqeeyay Ain al-Helweh, oo ah xerada qaxootiga ee ay ku noolyihiin falastiniyiinta ugu badan dalkaasi Lubnaan. Booqashadan Haniya ayaa […]